नायीका आँचल तनावमा, भनिन्, ‘यो अन्याय विरुद्ध ल’ड्न मलाई तपाईहरुको साथ चाहियो ‘ « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १०:३७
काठमाडौं । नायिका आँचल शर्मा सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय छन् । हुन त लकडाउनको समयमा अधिकाँश नायीका सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् । तर सोही सामाजिक सञ्जालले कतिपय नेपाली नायीकालाई अहिले तनाव दिएको छ । नायीकाहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक टिप्पणी, अ’श्लिल गा’ली ग’लौजका कारण तनावमा छन् । साथै अहिले भारतीय ह्याकरहरुले पनि नेपाली नायीकालाई निशाना बनाईरहेका छन् ।
खुलेआम चुनौती दिँदै उनीहरुले नेपाली नायीकाको टाउको जोडेर अश्लिल भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी नेपालका करिब १२ नायीकाहरुको बारेमा भिडियो बनाईएको छ । जसमध्य २ जना नायीकाको विषयमा निकै लामो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यद्धपी अहिले राष्ट्रिय कलाकार संघको आह्वानमा त्यस्ता साइट नेपालमा नखुल्ने बनाइएको छ ।
नेपाल भारतमा जारी सिमानाको विषयमा बोल्दा आफुहरुलाई यसरी निशाना बनाइएको भनेर नायीका आँचल शर्माले आ’क्रोश पोखेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै त्यसरी नायीकाहरु माथि निशाना बनाउनेहरु माथि आवाज उठाउन आह्वान गरेकी छन् । आँचललेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत, आफ्नो देशको बारेमा बोल्दा, राष्ट्रिय एकताको बिषयमा अडिग भएर एउटै आवाज निकाल्दा हामी नेपाली छोरी चेलीले यस्तो सहनु पर्ने ? भनेर आ’क्रोश पोखेकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन् – आफ्नो देशको बारेमा बोल्दा, राष्ट्रिय एकताको बिषयमा अडिग भएर एउटै आवाज निकाल्दा हामी नेपाली छोरी चेलीले यस्तो सहनु पर्ने ? जसले त्यस्ता प्रकारका अ’श्लिल भिडियो बनाएर हाम्रो चरित्र ह’त्या गर्ने र मानसिक त’नाव दिने कार्य गरेका छन् तिनीहरुको विरुद्धमा एक भएर अघि बढ्न जरुरी छ । यति बेला तपाई समस्थ साथी भाई अनि शुभचिन्तकको साथको जरुरी छ मलाई । कृपया सहयोग गरिदिनुस ।
पछिल्लो २ दिनदेखि सामाजिक संजालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै अश्लिल भिडियो बनाएर चरित्र हत्या गर्ने गिरोह सक्रिय देखिएको छ । नायिका शर्माले यो अवस्थामा सबै जना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार मात्र चलचित्र कलाकार संघले केही नायिकाहरूको चरित्र ह’त्या गर्ने मनसायले नक्कली पो’र्न भिडियो बनाउँदै सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । महानगरिय अ’परा’ध महाशाखा, टेकुमा पुगेर चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्कासहितको टोलीले प्रहरीलाई उजुरी बुझाएको हो ।
२८ असार २०७७, आईतवार १०:१४